Zeziphi izinto ezinomatshini wokucheba ingca? I-Zhengchida Blade Factory iya kwenza uhlalutyo lobugcisa kuthi. Isixhobo sesixhobo siyinto esisiseko ebeka ukusebenza ngokusika kwesixhobo, esinefuthe elikhulu ekusebenzeni ngokukuko, ekusebenzeni komgangatho, ekuqhubeni iindleko ...
Siyazi ukuba zininzi iimilo zemitshini yokucheba ingca, ke kuba nzima kakhulu kuthi ukuba sikhethe. Ukukhetha njani iincakuba zokucoca ingca? Ungayilungisa njani i-blade ye-mower? Kwaye ungayisebenzisa njani kwaye uyigcine i-blower mower blade? Lo mhleli ulandelayo uza kwazisa wena. Ungayilungisa njani i-blade ye la ...
Uyifaka njani iMower Mulching Blade
Iindidi zeeLower Mower Blades: I-lawn mowers isebenzisa iintlobo ezimbini zamabala. Ngokuqhelekileyo, umshini wokucheba usebenzisa ibala lokusika. Le blade isika ingca kwaye iyayikhupha nge-chute ngaphandle kwecala lokucheba. Kwakhona kusetyenziswa i-blade blade. Oku kuyilelwe ukusika ingca amatyeli amaninzi kunye nokujika ingca ...